धरान ताजा अपडेट: कांग्रेसलाई जित्न अब हर्क साङपाङ स्वतन्त्र लौरोलाई मात्र १७ मत आवश्यक – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०४, २०७९ समय: १२:०४:२४
धरान उपमहानरपालिकाको ताजा अपडेट: कांग्रेसलाई जित्न अब हर्क साङपाङ स्वतन्त्र लौरोलाई मात्र १७ मत आवश्यक
अहिले सम्मको मत परिणाम
रुख = 7959
लौरो = 7942
सूर्य = 6578
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदान गरेको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. २ को वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवार प्रदीप कार्की १ हजार ५११ मतसहित विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम् प्रतिश्पर्धी एमालेका विश्वराज विष्टले १ हजार ३०५ मत पाएका छन्। यो वडामा वडाध्यक्षसहित कांग्रेसको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा पनि यो वडामा कांग्रेसले बाजी मारेको थियो। कांग्रेसका कमलनाथ आचार्यले एमालेका रवि श्रेष्ठलाई १३ मतले पराजित गरेका थिए। यसपटक भने कांग्रेसले मतान्तर बढाएको छ। अहिले एमालेबाट वडाध्यक्षमा पराजित विष्ट त्यति बेला वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
एमाले अध्यक्ष वलीले वडा नं. २ बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति केन्द्रमा मतदान गरेका थिए। उनको निर्वाचन क्षेत्र झापा भए पनि भक्तपुरको बालकोटबाटै मतदान गर्ने गरेका छन्।
Last Updated on: May 18th, 2022 at 12:04 pm